Tanàna tsara indrindra ho an'ny fiantsenana: Toeran-kaleha 10 lehibe tian'ny mpizaha tany
Home » Lahatsoratra farany farany » fiantsenana » Tanàna tsara indrindra ho an'ny fiantsenana: Toeran-kaleha 10 lehibe tian'ny mpizaha tany
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Editorial • Vaovao • fiantsenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia fiheverana malaza iray izay voafaritra ho endrika fizahantany ankehitriny izay ataon'ny mpitsidika izay ny fividianana entana, ivelan'ny toeram-ponenany, no anton-kevitry ny fanapahan-kevitr'izy ireo ny dia. Aiza no alehan'ny mpivarotra?
Noho ny fitomboan'ny isan'ny olona manao vaksiny ho an'ny covid-19, mirongatra indray ny fitsangatsanganana, manomboka miseho indray ireo mpizahatany any amin'ny tanàna maro manerantany.
Rehefa manapa-kevitra amin'ny toerana haleha ianao, dia misy lafiny maro no miankina amin'ny safidinao sy ny teti-bolany.
Ho an'ireo mpizahatany izay mitady traikefa tsara amin'ny fivarotana amin'ny dia ataon'izy ireo dia notanisainay ireo tanàna tsara indrindra hitsidika an'ity taona ity.
Fiantsenana an-tserasera vs fiantsenana in-store
Ny safidintsika miantsena dia lehibe kokoa noho ny teo aloha. Raha mbola aleon'ny olona sasany mitsidika ireo fivarotana tena izy, ny sasany kosa manafatra ny entany sy ny serivisiny amin'ny Internet. Ny ankamaroan'ny olona kosa dia aleony mifangaro. Izahay dia manafatra fivarotana hameno ny vata fampangatsiahana, akanjo vaovao ho an'ny hetsika ho avy ary ny haingon-trano toy ny dian Ataovy manokana ny tranontsika.
Miaraka amin'ny smartphone, solosaina finday, ary fitaovana teknika hafa eo amin'ny fiainantsika, mora azo ny Internet isa-minitra amin'ny fiainantsika. Na dia malaza be aza ny fiantsenana an-tserasera - ary mbola ho safidy tsara ho an'ny ankamaroan'ny zavatra ilaintsika sy ilaintsika - ny fangatahana fiantsenana ao amin'ny magazay ihany koa dia mijanona ho matanjaka.
Inona no mamaritra ny tanàna fiantsenana tsara?
Ny traikefa amin'ny fiantsenana dia manintona ireo mpizahatany amin'ny tanàna erak'izao tontolo izao. Ny tanàna rehetra dia manolotra sehatra miavaka, fa ny ankamaroany dia manana zavatra iraisana. Matetika izy ireo tanàna lehibe, miaraka amina magazay isan-karazany sy mifangaro ivon-toeram-pivarotana misy rojo goavambe sy arabe manintona miaraka amin'ireo boutique eo an-toerana.
Miovaova ny vidiny arakaraka ny firenena misy ny tanàna, ary avy aiza ny mpizahatany. Tanàn-dehibe miantsena malaza dia manolotra fivarotana manomboka amin'ny vidiny ambany ka hatramin'ny rendrarendra. Ny traikefa ankapobeny dia zava-dehibe ihany koa. Ny toerana toa an'i New York City sy Paris dia manome zavatra be dia be ho hita, ary koa safidy maro ho an'ny trano sy fisakafoanana.
Tanàna malaza indrindra amin'ny fiantsenana
Mpizahatany, izay tia miantsena, ho aiza izy ireo? Ireto misy toerana sasany tsara toerana ankehitriny.
Mpizahatany an-tapitrisany no mitsidika ny renivohitr'i Angletera isan-taona. Ny tanàna dia manolotra ivon-toeram-pivarotana lehibe toa an'i Westfield, fiantsenana lafo vidy ao Harrods, fifanarahana tsara amin'ny tsena eny an-dalambe samy hafa, ary fivarotana maro mahafinaritra. Ny dite, akanjo ary fahatsiarovana no sasany amin'ireo entana be mpividy indrindra eto. Oxford Street sy Covent Garden dia faritra fivarotana be olona.
Ireo mpizahatany any Hong Kong dia toa manana famatsian-javatra tsy manam-petra amin'ny fiantsenana. Ny tanàna dia samy manana ny marika avo lenta any amin'ny foibe fiantsenana lehibe sy entana mahaliana amin'ny tsena eny an-dalambe. Kowloon dia iray amin'ireo faritra be mpividy indrindra. Ireo mpizahatany izay mitady varotra dia hanana fotoana be dia be ohatra, Temple Street sy Jade Market.
New York City dia feno distrika fiantsenana, miaraka amin'ny Fifth Avenue izay iray amin'ireo malaza indrindra. Tsara koa ny miantsena amin'ny varavarankely - indrindra rehefa manakaiky ny Krismasy ary feno haingon-trano ny tanàna. Greenwich Village, The East East Side, SoHo, ary Madison Avenue dia samy manolotra traikefa fiantsenana miavaka.
Toerana fivarotana malaza kokoa:
Manintona mpitsidika an-tapitrisany isan-taona ireo tanàna folo ireo. Betsaka amin'ireo mpizahatany ireo no miondrana mody miaraka amin'ny valiziny izay feno kokoa noho ny tamin'ny nahatongavany.
Raha mila vaovao miantsena bebe kokoa kitiho eto.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 32